BLOGကိုး | နတ္ထိ
« Blogအက္ခရသညာတော (၈)
နတ္ထိ + ၀.၉ »
natthi blog ၉နှစ်ပြည့်ပြီ။ (တကယ်တော့ ၂၀၀၇ မတ်လလယ်လောက်က စခဲ့တာ။ blogကို ပြင်ရင်းနဲ့ လကုန်ရက်ရောက်မှ ပိုစ့်ဟောင်းတွေ တစ်ရက်ထဲ စုတင်လိုက်မိတာ)
ပထမ ဒီမှာ ရေးနေတာ။ ရပ်လိုက်တယ်။ ဒီမှာ ဆက်ရေးတယ်။ ရပ်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ပိုစ့်တွေ အကုန် ဒီကို ပြောင်းလိုက်ပြီး ဆက်ရေးခဲ့တယ် (ခု မရေးတာကို ကြာနေပြီ)။
အရောင်စုံ အသွေးစုံလှတဲ့ blogosphereထဲမှာ ၉နှစ်ကြာ ရှင်သန်နေခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ True Colorsသီချင်းကို ပြန်လည်ခံစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီသီချင်းက versionအမျိုးမျိုး ရှိပေမယ့် The British Paraorchestraနဲ့ ထုတ်တဲ့ versionကို နှစ်သက်မိတယ်။
blogလောကမှာ သတိတရဖြစ်မိတဲ့ bloggerက ပန်ဒိုရာ။ သူ့ရဲ့ blogသက်တမ်းနဲ့ နတ္ထိblogသက်တမ်းက မတိမ်းမယိမ်းပါ။ ရှင်သန်ခြင်းတွေ ဖြန့်ခင်းတတ်သော Blogpoet Pandora commentထားခဲ့တဲ့ True Colorsသီချင်း မြန်မာဘာသာပြန်တစ်ပုဒ်ကိုတော့ blog ၉နှစ်ပြည့်လက်ဆောင်လို့ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
အို… ငါ နားလည်ပါရဲ့.
မင်းဟာ အားလုံးကို မျက်ခြေပြတ်သွားနိုင်ရဲ့.
ပြီးတော့ မင်းရင်ထဲက အမှောင်ထုဟာ.
မင်းကိုယ်မင်း သေးငယ်တယ်လို့ ထင်မိအောင် လုပ်နိုင်ရဲ့.
ဒါပေမဲ့ မင်းရဲ့အရောင်အသွေးမှန်ကို ကိုယ်မြင်နေ.
မင်းရဲ့ အရောင်အသွေးမှန်ကို ကိုယ်မြင်ရဲ့.
ဒီတော့ သူတို့ကို အရောင်အသွေးမှန် ပြလိုက်ဖို့.
တကယ်လို့ ဒီကမ္ဘာကြီးက မင်းကို ရူးအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်.
ပြီးတော့ မင်းခံနိုင်ရည်ရှိသမျှ အကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းအနားမှာ ကိုယ်ရှိနေမှာ မင်းသိပါတယ်လေ.
ပြီးတော့ မင်းရဲ့အရောင်အသွေးမှန်ကို ကိုယ်မြင်နေမှာ.
တုဝံ သဟ သောကာတုရစက္ခူဟိ.
ဒုက္ကရံ ဓိတိံ ကာတုံ.
တွံ ဝိဿရေယျာသိ သဗ္ဗေန သဗ္ဗံ.
အထ အန္ဓကာရော အဇ္ဈတ္တေ တဝ.
သမ္မတ္ထော ကာတုံ တုဝံ အတိခုဒ္ဒကံ.
တထာဟံ ပဿာမိ တဝ ပကတိဝဏ္ဏေ.
အဟံ ပဿာမိ တဝ ပကတိဝဏ္ဏေ.
တသ္မာဟံ ပိယာယာမိ တုဝံ.
မာ ဘာယိ တေသံ ပကာသိတုံ.
ပါတုကရောဟိ မေ သိတံ အထ.
မာ ဒုမ္မနော၊ နာဟံ သက္ကောမိ သရိတုံ.
ယဒါဟံ ပဿိံ တုဝံ ဟသန္တံ.
သစေ အယံ လောကော ပါပေတိ တုဝံ ခိတ္တစိတ္တံ.
အထ တယာ ဂဟိတံ သဗ္ဗံ တံ၊ ယံ သဟိတံ.
တွံ ပက္ကောသာဟိ မံ.
တွံ ပန ဇာနာသိ၊ အဟံ တတ္ထ.
အထာ.ဟံ ပဿိဿာမိ တဝ ပကတိဝဏ္ဏေ.
အထာဟံ ပဿိဿာမိ တဝ ပကတိဝဏ္ဏေ.
Oh I realize.
It’s hard to take courage.
And the darkness inside you.
But I see your true colors.
True colors are beautiful,.
Show measmile then,.
Don’t be unhappy, can’t remember.
And I’ll see your true colors.
This entry was posted on March 31, 2016 at 11:45 pm and is filed under ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ, ဂီတ, ဘာသာပြန်, အမှတ်တရ.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.